galmada lugaha | Gaaloos.com
Home » galmada » galmada lugaha
galmada cagta - waa kicinta galmada in ay lugaha, inta badan haweenka. cagaha - tani waa qaabka ugu caansan ee galmada cagaha, oo ka kooban in lugaha iyo amaantii faraha badanu waxa suulasha. Taageerayaasha galmada faraha ku faraxsanahay nooca cagta, dhadhan, urin maqaarka, dhaqdhaqaaqa farta ama heerkulka. galmada cagta waxaa inta badan marka la isku daro ku hamiday ah sharabaadada, kabaha iyo sharabaadada.
Dhuugista - waa riix riixid cagta ah. Dhuugista loo yaqaan ka hor galmada.
Haddii wiil ee Idamwarsadeen, dumarka aan la heli karin, oo uu fiirin karaa oo keliya marka ugu qaybta ugu gaari karo ee jidhkooda - lugaha. Cagaha -. Tani waa qaybta ugu qaawan ee jidhka, sidaa wiilasha si xor ah iyada daawan kartaa
galmada cagta ka hor fasalada galmada cagta waxay u baahan tahay daryeel gaar ah oo aad cagta. Waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo kiriimyada iyo bad in jilciso maqaarka iyo waxa ay ka dhigi qooraansaneynaa kala duwan. U hubso in laga takhaluso . nidaamsan iyo dar ah lugaha tan jiidasho leh. Haddii nin waxa la leefo iyada suulasha, ka dibna mar walba rinji ciddiyaha maalin ka hor lugta las aad -.
Title: galmada lugaha